Malunga nathi - Dongguan Kangna Electronic Technology Co., Ltd.
I-Dongguan Kangna iTekhnoloji yeTekhnoloji yoKwakha, Ltd.
yenye abenzi PCB ephambili e China leyo eneemfuno ezizodwa kwimveliso PCB, ibandla PCB, uyilo PCB, PCB prototype, njl inkonzo yokuvelisa elektroniki.
Le nkampani yasekwa ekuqaleni kuka-2006 e Shajiao commuity, Humen Town, Dongguan City, kwiPhondo Guangdong. Umzi-mveliso ugubungela indawo yemveliso
ye-10000 yemitha yesikwere ngomthamo wenyanga wama-50000 Sq wamitha kwaye unenkunzi ebhalisiweyo ye-8 yezigidi ze-RMB.
Inkampani inabasebenzi abangama-800, kubandakanya ne-10% yophando kunye nophuhliso; I-12% yolawulo lomgangatho; kunye ne-5% yeqela lobuchwephesha lobuchwephesha elineminyaka engaphezu kwe-10 yamava kushishino lwe-PCB.
Ezona mveliso ziphambili yinkqutyana ye-1-40 yePCB, kubandakanya iMCPCB (ibhodi yebhodi kunye nealuminium), i-FPC, ibhodi eqinileyo, i-PCB engqingqwa, ibhodi esekwe kwibhastile, ibhodi ye-HDI, ibhodi ephezulu yeTg, ibhodi yobhedu enzima, ibhodi enobunzima obuphezulu kunye nendibano yePCB . Iimveliso zethu zisetyenziswa kakhulu kwimizi-mveliso, kwezonyango, kwezonxibelelwano nakumzi mveliso weemoto, ikhompyuter, njl.
Sinokukunika iprototype yokujika ngokukhawuleza, ibhetshi encinci kunye nebhetshi enkulu yeemveliso. Singaziphatha ngokulula zonke iimfuno zakho ezinzima kakhulu. Iimveliso zethu ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ziya kukunceda ukuba uphucule umgangatho weemveliso zakho, zikuzisele ixabiso, kwaye ekugqibeleni zikwenze ukhuphisane ngakumbi kwimarike yakho.
Sisebenzisa inkqubo engqongqo yolawulo lomgangatho ukuqinisekisa ukuthembeka kunye nozinzo lomgangatho wemveliso. Iimveliso zethu ze-PCB zihlolwa kuyo yonke inkqubo yemveliso ye-PCB ukuqinisekisa ukuba iibhodi zesekethe eziprintiweyo zikumgangatho ophezulu zisiwe kuwe.
Sidlulisile ukuqinisekiswa kwe-UL, kunye ne-IATF16949. Siyakholelwa ukuba umgangatho bubomi, kunye nokusukelwa kweziphene zero yeyona njongo yethu esemgangathweni. TUsebenzisa inkampani yefilosofi yeshishini "yokunyaniseka, ukusebenza nzima, umgangatho wokuqala, inkonzo kuqala", Ukubambelela kwinkcubeko yenkcubeko yabantu abajolise ebantwini, ukufezekisa imeko yokuphumelela yamaqabane noluntu.
Sithanda ukuva kuwe ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iimfuno ezizodwa.
Ukusekwa kweYunithi yeShishini leSMT ukubonelela ngenkonzo yokumisa kubathengi.
Ukusekwa kweziko lophando nophuhliso.
Ukulungiselela iSebe lezoShishino lwe-SMT.
Umzi-mveliso wafudukela kwindawo entsha kwaye wongeza imveliso entsha kunye nezixhobo zovavanyo.
Yandisa amandla emveliso ukuya kwi-30000 Sq.m ngenyanga.
ukuqala ukwazisa umgca wemveliso MCPCB, ukuvelisa zeendawana yobhedu kunye aluminium zeendawana PCB.
KangNa Electronic Technology Co., Ltd. yasekwa.
Yenza ngobunono imveliso nganye ukuyenza i-boutique
Thatha yonke iodolo ngokungxamisekileyo kwaye uqinisekise ngexesha lokuhanjiswa
Yiba nesibindi ngokwaneleyo sokujongana nayo yonke imfuno, uvuselele iimfuno ezizodwa
Ukunyaniseka kubo bonke abathengi kunye nokubonelela ngenkonzo eyonelisayo